Uri kubata nemutemo wekufambisa here? | Law & More B.V.
URI KUDIWA NECHEMA CHEMA?
Iyo Logistics chikamu inosimba uye inogara ichifamba. Nekuda kwekudyidzana kwepasi rese kwekutengeserana, zvinhu zvakawanda nezvimwe zvinotakura makiromita akawanda nenzira dzakasiyana. Izvi zvinogona kusanganisira kutakurwa negungwa, mugwagwa, njanji pamwe nemhepo. Mapati mazhinji akadai sevatengi, vatakuri, vanoendesa mberi, vanishuwarenzi uye vanogamuchira vari kuita izvi. Mushure mezvose, zvinhu zvinogamuchirwa uye kutakurwa zvakare nemapati akasiyana siyana.
Kunyangwe maitiro aya ekufambisa kazhinji asiri kukonzera matambudziko emapato ese aya, dzimwe nguva anogona kuramba asiri iwo. Kana chekufambisa chasvika pakamira, kunonoka kunoitwa kana kuti zvinhu zvinotakura zvakuvadzwa kana kurasika munzira, mibvunzo yemhosva inogona kubuda pakati pemapato. Ndiani anotarisira uye nokudaro anofanira kudzorera kukuvadzwa kwakaitwa? Uye matanho api anogona kutorwa kana bato rikasasangana nezvisungo zvaro? Mhinduro kumibvunzo iyi ichatanga kuti yese inofanirwa kuwanikwa muwebhu yezvibvumirano pakati pemapato ese aya.
Pamusoro pezvibvumirano pakati pemapato, mitemo yenyika dzinofanirwa kutariswa painenge ichiita nenyaya dzemutemo wekufambisa. Mushure mezvose, kutakura kunowanzoitika kunze kwenyika uye nekudaro kuyambuka miganhu yenyika dzakasiyana. Mitemo yenyika nokudaro inoita basa rakakosha. Kokorodzano dzenyika dzakawanda dzinofanira kushandiswa dzinoenderana nenzira yokufambisa. Semuenzaniso, kokorodzano yeHague-Visby Rules inoshanda kune zvekufambisa zvegungwa uye neMontreal Convention inoshanda kune kutakura mweya. Semuenzaniso, musangano weCMR wakakosha mukufambisa kwemigwagwa.
Nekudaro, kwete chete miganhu yenyika inoyambuka nemutemo wekufambisa. Masimba akasiyana siyana akaiswawo zvine chekuita nemutemo wekufambisa. Semuenzaniso, pane yakajeka kuwanda pakati pemutemo wekufambisa nemutemo wevashandi, mutemo wechibvumirano, mutemo wekambani nemutemo wepasi rese. Mushure mezvose, semuenzaniso, mutakuri anoshandisa zviisa pasi uye mairairo anopiwa kune vatakuri vemitoro. Mumamiriro ezvinhu aya, nyaya dzine chekuita nemutemo wekufambisa dzinogona kumukawo. Uri kubata nenyaya yakadai here? Ipapo ruzivo rwakakura uye rwekuziva nezvezvinhu munzvimbo dzambotaurwa.
Mukuona kwezvakataurwa pamusoro apa, iyo logistics chikamu chiri pamusoro pezvose zvakaoma uye zvinoverengeka zvinhu zvinofanirwa kutariswa. At Law & More isu tinonzwisisa kuti logistics inosanganisira zvido zvakakwana, zvese muNetherlands neEurope, pamwe nepasirese. Ndosaka tichifunga kuti zvakakosha kuve nhanho imwe pamberi pezvinogona kuitika matambudziko nekugadzira (kutakura) zvibvumirano uye zvakajairika mamiriro nemamiriro. Inogona, semuenzaniso, kudzora kana kusabvisa chikwereti zvine chekuita nenyaya dzakasiyana dzemitemo yekutakura.
Uri kubata nekukuvadzwa kwhumbi, maitiro, kuunganidzwa kwezvikwereti kana nyaya dzekubvuta mune zvemutemo wekutakura? Kunyangwe ipapo iyo Law & More timu iripo kwauri. Magweta edu haasi ivo chete nyanzvi mune zvemutemo wekutakura, asiwo mune mamwe maratidziro ane hukama. Une mimwe mibvunzo here? Ndapota taura Law & More.